Ufundisa njani unyana wam ukubiza u "r" - Ingcebiso evela koomama banamhlanje Oomama Namhlanje
Ufundisa njani umntwana wam ukubiza u "r"
UAlicia tomero | 14/05/2021 10:00 | Iingcebiso, Intsapho
Kwiinyanga ezili-9-10 ubudala, abantwana baqala Biza amagama akho okuqala. Ngexesha lenkqubo bafunda amagama ngendlela yendaleko kwaye ezinye iifonim ayizizo ezona zilungileyo abanokuzifunda ngexesha lokuqala kwabo. "Mamama, papapa, tatata ..." zezinye zezandi eziqala ukudibanisa naphakathi kwazo unobumba "r" kunokuba nzima ukubiza.
Kunyaka ngamnye oqhubela phambili baqala ukudibanisa izandi ngakumbi kunye nokwenza amagama antsonkothe ​​ngakumbi. Bafuna isifundo esintsonkothileyo sokuphunyezwa kweeseti ezininzi, ngakumbi ezitshixiweyo, kwaye masingatsho eyona ixhaphakileyo kuzo zonke: ukubizwa kwe "r".
1 Kutheni unengxaki yokubiza u "r"?
2 Ufundisa njani umntwana wam ukubiza u "r"
Kutheni unengxaki yokubiza u "r"?
Yinyani eqhelekileyo kubantwana esele iqala ukubiza ezi ntlobo zamagama ngoonobumba "r" le nto ibizwa ngokuba yi-rotacism. Ingxaki kuxa abantwana benengxaki yokubiza le phoneme ngokuchanekileyo, ukuvelisa Dyslalia.
Le nyaniso inokuba yeyokwexeshanaEwe, kukho oonobumba abathile abanokuba nobunzima, njengo "d" no "z". Ixesha elingaphezulu, abantwana bafumana ubuxhakaxhaka kwaye balungisa esi siphene njengoko beziqhelanisa kwaye belola iindlebe zabo.
Ukungaqondakali kakuhle kunokubakho ithathwe ekubekweni kakubi kolwimi ngokudibeneyo nomoya, ebangela ukuba ingabizwa ngokuchanekileyo. Esinye isizathu kuxa abantwana besebenzisa i-pacifier ixesha elide, elinakho ukuba nefuthe njengomzekelo. Kodwa ngaphezulu kwako konke, ungaze ucinge ukuba kulibaziseka ngokwengqondo.
Ukubizwa ngokungachanekanga kwe- / r-rr / kunye nezinye iifonimu kunokuba njalo uphawu lokujonga ukusuka kwiminyaka emi-5-6, apho kuqheleke kakhulu kukudibana nengcali. Oyena mntu ulunge kakhulu kolu hlobo lwetyala yingcali yokuthetha, oya kuthi enze uqeqesho oluthile kunye nokuqhelanisa ngokwaneleyo nengxaki.
Ukwenza umthambo ngokulula kunokwenziwa ekhaya ukuze sikwazi ukuvuselela indlela elalibizwa ngayo. Kuyacetyiswa ukuba uqale wenze imithambo yokuphefumla apho umntwana kufuneka aphefumle umoya ngeempumlo kwaye aphefumle ngomlomo ngendlela ecothayo nefutshane. Ungaphefumla ngaphakathi nangaphandle ngomlomo ngokuvuthela kathathu.
Omnye umthambo ngu ukwenza imithambo ngamalungu omlomo: hambisa ulwimi usuke kwelinye icala uye kwelinye, ulikhuphe ulwimi ulukhuphe ngomlomo kangangoko kunokwenzeka, uhambise ulwimi kwisangqa ngaphezulu kwemilebe kwaye uzame ukubamba indawo ephezulu ngasemva kwamazinyo aphezulu.
Ekhaya unako ziqhelise amagama aqulathe unobumba “r”, ungasebenzisa ukugoba ulwimi, ukuphinda amagama ngesi sandi ngaphezulu nangaphezulu kwaye ngaphezu kwako konke ukufundisa indlela oyenza ngayo inyathelo ngenyathelo kunye nokuhamba kancinci. Sikunika ividiyo yokuqhelanisa ekufundisa ukuba ungayisebenzisa njani i- "r", yenye yezona zininzi onokuzifumana kweli qonga, bona konke abanokukunika kona.
Ukufunda nako kunentsingiselo koku, kukho iincwadi ezibhaliweyo nezijolise kubo ukuze bafunde abantwana ukubiza ngokuchanekileyo. 'Iincwadi zokuthetha nge-erre', 'erre que erre', 'kaloliwe kaRigoberto'.
Dlala nomntwana wakho kwisandi sika "r" ngezinto kunye nezinto zokudlala ezinokuqulatha izandi. Amagama anje ngomgaqo kaloliwe anokunikwa ugxininiso olukhulu ukubiza; guitarrrrra, rrrrrueda, okanye isandi senjini ngokwaso (rrrrrrr) xa usiya kudlala neetrektara zakho, iilori okanye iimoto.
Kubaluleke kakhulu Gxininisa kwindlela yokubiza amagama echanekileyo kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ekulungiseni i-rotacism. Abantwana baya kuqala ukufunda nokubhala kwaye ngenxa yoku kufuneka bazi indlela yokubiza ngokuchanekileyo oku kuya kubanceda kakhulu ukubhala kwabo okufanelekileyo. Ukongeza, ngexesha lokufunda, banokubambeka ngamagama, nto leyo eyenza kube nzima ngakumbi kubo ukuba ukuqonde ukufunda.
Kubalulekile ukulawula lo mqobo mncinci, ukuba awunjalo kwaye uthathe ixesha lokuwulawula inokugxilwa kwaye ke kunzima ngakumbi ukuyilungisa. Ngaphandle kwenjongo kunokuba nefuthe ekudaleni ukuzithemba okuphantsi emntwaneni kwaye kunokudala Uthintitha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Ufundisa njani umntwana wam ukubiza u "r"
Unyana wam ngu-hypochondriac
Iapps ezi-6 zabantwana zokufunda iJografi yaseYurophu